Cwangcisa ukukhanya kwebhetri yokusetyenziswa kwebhetri
ngomphathi ku 21-07-12
I-China izakukhawulezisa iinzame zokuphinda zisebenzise iibhetri ezintsha zamandla ombane ngokuhambelana nesicwangciso seminyaka emihlanu sokuphuhlisa uqoqosho setyhula esityhilwe ngoLwesithathu, zitshilo iingcali. Ilizwe kulindeleke ukuba lifikelele kwinqanaba eliphezulu lokutshintshwa kwebhetri ngo-2025. Ngokwesicwangciso esikhutshwe yi-National Developmentme ...
Iingcebiso ezi-4 ezibalulekileyo xa uthenga i-Forklift efanelekileyo yeBhetri okokuqala
Ngaba ujonge ibhetri efanelekileyo ye forklift yakho? Emva koko uze kwiphepha lasekunene! Ukuba uxhomekeke kakhulu kwiimfoloko ekusebenziseni ishishini lakho lemihla ngemihla, ke iibhetri ziyinxalenye ebalulekileyo yelinge lakho. Ukukhetha uhlobo olufanelekileyo lweebhetri kunempembelelo enkulu kwinkampani yakho iyonke ...
ngomphathi ku 21-07-02
Ngokwedatha yamaxabiso eoyile yamva nje, ipetroli yasekhaya eyi-92 kunye ne-95 izakuvuka i-0.18 kunye ne-0.19 yuan ngobusuku bukaJuni 28. Ngexabiso langoku le-6.92 yuan / ilitha ye-petroli engama-92, amaxabiso eoyile yasekhaya abuyele kwi-yuan ye-7. Ixesha. Oku kuyakuba nefuthe elikhulu kubanini bemoto abaninzi abafundwayo ...
Izinga lokukhula ngokudibeneyo kweemarike zebhetri yeGalufa ukusuka ngo-2020-2024 iphantse ibe yi-5%
Imakethi yebhetri yeGalufu yegalufa inokuthi ikhule nge-92.65 yezigidi zeedola phakathi kowama-2020 nowama-2024, ngomyinge wokukhula komyinge weepesenti ezi-5, ngokwesibhengezo samva nje esenziwe ngumbutho wamazwe aphesheya wophando lweTechnavio. Intshona Melika yeyona igalufa inkulu inqwelo yegalufa ma ...
I-US ifuna ukulungisa ikhonkco lokubonelela ngebhetri ye-lithium
I-United States ibhengeze izicwangciso zokuseka ubonelelo lwasekhaya lweebhetri ze-lithium-ion, ezibalulekileyo kwizithuthi zombane kunye namandla ahlaziyekayo. Injongo entsha yenkampani kukuba nayo yonke into ngaphakathi kwemida yayo, ukusuka kwimigodi ukuya kwimveliso ukuya kwibhetri, ngo-202 ...
Izibonelelo kunye necandelo lokwenziwa kwetshathi kwibhodi
Olona ncedo luphambili kwishaja esemotweni kukuba isebenzisa amandla e-AC ashelfini, anokuxhonywa nakweyiphi na enye yeebhiliyoni zeentengiso ezifakwe kwisakhiwo ngasinye ngocingo olunye. Inqanaba loku-1 lokutshaja kwe-AC lisebenzisa amandla esigaba esinye, unikezelo lwamandla angama-120V lumalunga ne-1.9KW, 220V-240V yokuhambisa umbane ...